4 ပတ်သားကလေး - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း » ကလေးငယ်ပထမနှစ် »4ပတ်သားကလေး
ရေးသားသူ Dr.Aye Myat Myat Noe ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win
ခုဆိုရင် သင့်ရင်သွေးလေးဟာ လေးပတ်သားလေးဖြစ်နေပါပြီ။ ကလေးလေးဟာ စုပ်ရတာကိုပိုနှစ်သက်လာသလို လိုလည်းလိုအပ်တာကြောင့် မတားပါနဲ့။ သင့်ရင်သွေးလေး ငြိမ်နေဖို့ ချိုလိမ်လေးတွေက တော်တော်အသုံးဝင်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ တစ်ခါတလေ ကလေးလေးဟာ သူ့လက်မ သို့မဟုတ် လက်ချောင်းလေးတွေကိုပါ စုပ်နေတာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ လေးပတ်မြောက်မှာဆိုရင် သင့်ရင်သွေးလေးမှာ အမြင်အာရုံတွေပိုကောင်းလာပြီး ၂၀-၃၅ စင်တီမီတာ အကွာက အရာတွေကို ကောင်းကောင်းအာရုံစိုက်ကြည့်နိုင်လာပါပြီ။
ကလေးကိုနိုးနေလျှင်တောင်မှ ပက်လက်အနေအထားနှင့်သာအိပ်စေဖို့မမေ့ပါနဲ့၊ သူတို့ခေါင်းလေးတွေဟာ ချိုင့်ဝင်နိုင်ချေရှိတာမို့ ကျောနှင့်သာအိပ်စေခြင်းက ထိုအခြေအနေကို ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။
သူတို့ခေါင်းလေးတွေထောင်လာပြီး သင့်ကိုကြည့်ဖို့အတွက် သူတို့မျက်စိရှေ့ သင့်မျက်နှာကိုထားပြီး မြှူပါ။ မှောက်လျက်အနေအထားမှာ တဘက်၊ စောင် အလိပ်ကလေးကို သူတို့ရင်ဘတ်အောက်မှာထားပြီး သူတို့ခေါင်းလေးတွေထောင်လာနိုင်ဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ သူတို့ရဲ့အာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ကြွက်သားထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွေ ဖွံ့ဖြိုးလာပါတော့မယ်။
ဒီအချိန်မှာတော့ ဆရာဝန်ချိန်းတဲ့အချိန် စစ်ဆေးဖို့သွားရပါမယ်။ ဆရာဝန်က
• ကလေးခြေဖနောင့်လေးမှသွေးယူကာ ကလေးမှာ phenylketonuria ဆီးရောဂါတစ်မျိုးမျိုးရှိသလား၊ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းနည်းသလား သွေးစစ်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ သွေးစစ်ခြင်းဟာ တခြားသောဇီဝဖြစ်စဉ် ချို့ယွင်းမှုတွေကိုလည်း စစ်ဆေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တခြားသောကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့ အခြားသောစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်လိုပါကလည်း တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
• အသည်းရောင်ဘီ အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုလာပါပြီ။ သင့်မှာထိုရောဂါရှိနေပါက ပိုလို့ပင်အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်မှာမရှိပါက ကလေးငယ်ကို ပထမနှစ်လအတွင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ အသက်နှစ်လအရွယ်မှာ ဆုံဆို့ကြက်ညှာမေးခိုင် သုံးမျိုးစပ်ကာကွယ်ဆေးလည်း ထိုးပေးလည်းရပါတယ်။ သင့်ကလေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးတော့မည်ဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
• အကြားအာရုံစမ်းသပ်ခြင်း။ သင့်ရင်သွေးလေး အကြားအာရုံကောင်းမကောင်းကို ဆရာဝန်ကစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
ပထမလတွေဟာ ကလေးတွေအများဆုံးငိုသောအချိန်တွေပါ။ လေထိုးလေအောင့်ခြင်းဟာ ကလေးတွေမှာ အချိန်အကြာဆုံးငိုစေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါ။ အသက်သုံးလအောက်ကလေးတွေရဲ့ ၁၀-၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ပထမဆုံးသုံးလမှာ အငိုဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လေထိုးလေအောင့်ကြောင့်ငိုတာကတော့ မတူပါဘူး။ ဆရာဝန်တွေက ‘သုံး’ သုံးမျိုးနဲ့ခွဲပါတယ်၊ တခါငိုရင်သုံးနာရီလောက်ငိုခြင်း၊ တစ်ပတ်မှာအနည်းဆုံးသုံးကြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ အနည်းဆုံး သုံးလလောက်ကြာခြင်း။ များသောအားဖြင့် တတိယပတ်နဲ့ ဆဌမပတ်တို့မှာဖြစ်တာများပါတယ်။ တခါတရံ လေအောင့်ခြင်းဟာ ညနေပိုင်းတွေမှာ ရုတ်တရတ်ထဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ ချော့မရအောင် သည်းကြီးမည်းကြီးငိုတတ်ပြီး လက်သီးလေးတွေဆုတ်ကာ၊ ခြေထောက်လေးတွေ မိုးပေါ်မြှောက်ပြီး ငိုတတ်ကြပါတယ်။ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူတတ်ပေမယ့် များသောအားဖြင့် သုံးလလောက်ကြာပြီးရင် ပျောက်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါဟာကလေးတွေရဲ့ ကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ အစာချေစနစ်ကြောင့် ဒါမှမဟုတ် အစာနဲ့မတည့်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဒါဟာကလေးတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်တဲ့ အာရုံကြောစနစ်ကြောင့် ဒါမှမဟုတ် သူတို့ရဲ့ နုနယ်သေးတဲ့သဘာဝတရားကြောင့် ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေလေထိုးလေအောင့်ခံစားနေရရင် မိဘတွေအနေနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပေမယ့် ဒါဟာ ယာယီပြဿနာပါ။
ကလေးတစ်ဦးချင်းစီဟာ ကွဲပြားကြပြီး နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ချော့ရတာကြောင့် ဘယ်နည်းက ကလေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ စမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
• သင့်သားအိမ်ထဲကလို နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ငြိမ်သက်သာယာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးကြည့်ပါ။ စောင်ပုံလေးထဲမှာထွေးထားပြီး သင့်ရင်ခွင်ထဲ ဒါမှမဟုတ် ပုခက်ထဲမှာ လှုပ်ယမ်းပေးပါ။
• တချို့ကလေးတွေက ကြိမ်နှုန်းတူဆက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ အသံတစ်ချို့နဲ့ချော့လို့ရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဖုန်စုပ်စက်လို၊ အ၀တ်လျှော်စက်လိုမျိုး ။ နောက်တစ်နည်းကတော့ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ရေချိုးတာဖြစ်ဖြစ် ၊ ရေနွေးပုလင်းလေး ကလေးဝမ်းဗိုက်ပေါ်ထားတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ချိုလိမ်လေးပေးထားတာမျိုးလုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တချို့မိဘတွေကတော့ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ လေဆေးမျိုးနဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။
• ကလေးလေးငိုနေတာကိုကြားရတာ စိတ်ပင်ပန်းပြီး ရှု့ပ်ထွေးစရာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်နဲ့အလှည့်ကျ ကလေးကိုချီဖို့၊ ချော့ဖို့ တစ်ယောက်ရှိထားရင် ပိုအကူအညီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ သန့်စင်ခန်းအသုံးပြုဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကလေးကိုခဏထားခဲ့ရတော့မယ်ဆိုရင် ခဏလေးပဲဖြစ်ကြောင်း သူ့ကိုအာမခံခဲ့ပါ။ ကလေးက နာနာကျင်ကျင်ငိုနေတာဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ကိုအသိပေးပါ။ အလေးချိန်လျော့သွားရင်၊ ဖျားလာရင် ဒါမှမဟုတ် သုံးလထက်ကြာနေရင်တော့ တခြားကျန်းမာရေးပြနာတွေရဲ့ လက္ခဏာတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအရွယ်မှာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ ကလေးကျန်းမာရေးကို အထူးသတိထားသင့်ပါတယ်။ သင် သို့မဟုတ် သင့်ခင်ပွန်းသည်ဆေးလိပ်သောက်ရင်တော့ ရပ်ပစ်လိုက်တာကောင်းမှာပါ။ ဆေးလိပ်ငွေ့တွေဟာ ကလေးအတွက် အရမ်းကိုအန္တရာယ်များပါတယ်။ အဆုတ်အားနည်းစေပြီး ကလေးတွေကို ရောဂါပိုးဝင်စေခြင်း၊ အိပ်နေစဉ်အသက်ရှူရခက်ခြင်း တို့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ မွေးကင်းစကလေးရုတ်တရက်သေဆုံးရခြင်းကို နှစ်ဆပိုဆိုးစေပါတယ်။ သင်က ကလေးလေးအခန်းထဲမှာ မသောက်ရင်တောင်မှ အငွေ့တွေ ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သင့်တစ်အိမ်လုံးကို ပျံ့သွားနိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်နဲ့ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့တိုင်ပင်ပါ။ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက်က ချက်ခြင်းမဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုပါက သင့်ရင်သွေးလေးကို မထိခိုက်အောင် ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
စတုတ္ထမြောက်ရက်သတ္တပတ်ကို ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
မပူပါနဲ့၊ ဘယ်လိုတွေကြုံနေရ ကြုံနေရ သင်ဟာတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး။ နောက် ၅ပတ်မြောက်မှာလည်း သင့်ကိုကူညီပေးဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေမှာပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇှနျ 27, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇှနျ 27, 2018
American Academy Of Pediatrics. American Academy of Pediatrics Caring for Your Baby and Young Child, Birth to Age56th Edition. New York: Bantam, 2014. Print version.
Murkoff, Heidi. What to Expect, The First Year. New York: Workman Publishing Company, 2009. Print version.
Your 4-week-old. http://www.babycenter.com/6_your-4-week-old_1134.bc. Acccessed date 02/06/2015
ဘေဘီလေးတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ ခေါင်းအုံးနဲ့စသိပ်မလဲ
ကလေးတွေကို လေယာဉ်စီးခိုင်းလို့ ရရဲ့လား
မြန်မာနိုင်ငံက ကလေးငယ်တွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ အစာခြေစနစ်ပြဿနာများ
အမြင်အာရုံကောင်းပြီး ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ကလေးဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ